Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao Tibet dia manomboka miasa
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Aogositra 7, 2021
Ny terminal vaovao dia hanampy ny seranam-piaramanidina hahatratra ny kendrena amin'ny fikirakirana mpandeha 9 tapitrisa sy entana 80,000 2025 taonina sy paositra amin'ny XNUMX, hoy ny seranam-piaramanidina.
Nanomboka ny faran'ny 2012 dia nanitatra ny fampiasam-bolany fotodrafitrasa ao Tibet i Sina.
Ny faritra dia nanangana zotram-piaramanidina 130, miaraka amin'ireo tanàna 61 mifandray amin'ny sidina.
Seranam-piaramanidina Lhasa Gonggar no seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Tibet.
Ny tobin'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny faritanin'i Tibet Autonomous China dia nanomboka niasa androany, taorian'ny nanamboarana azy telo taona.
Nanomboka niasa ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao Tibet
Ny terminal vaovao an'ny seranam-piaramanidina Lhasa Gonggar dia toa voninkazo lotus avy any ambony. Hanampy ny seranam-piaramanidina hahatratra ny tanjona kendrena ny fikirakirana mpandeha 9 tapitrisa sy entana 80,000 2025 taonina sy paositra amin'ny XNUMX, raha ny filazan'ny seranam-piaramanidina.
Any amin'ny Faritra Gonggar ao amin'ny tanànan'i Shannan sy akaikin'ny renivohitry ny Lhasa, ny seranam-piaramanidina Lhasa Gonggar no seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Tibet.
Nanomboka ny faran'ny 2012 dia nanitatra ny fampiasam-bolany fotodrafitrasa ao Tibet i Sina. Ny faritra dia nanangana zotram-piaramanidina 130, miaraka amin'ireo tanàna 61 mifandray amin'ny sidina. Ny isan'ny dia nataon'ny mpandeha tamin'ny alàlan'ireny seranam-piaramanidina ireny dia nahatratra 5.18 tapitrisa tamin'ny taona 2020.
Omicron COVID-19 vaovao dia any UK, Belzika…
Fandinihana ny homamiadan'ny prostate: Lehilahy, izao ny fotoana
Nitombo tsikelikely ny fitakiana zotra an'habakabaka manerantany amin'ny...
Mihevitra ny Britanika fa tokony hitohy ny fanaovana saron-tava amin'ny...
Alatsinainy Smart ao amin'ny IMEX America: Fihaonana amin'ny namana taloha
Leukemia Myeloid: Fitsaboana vaovao
IATA dia nanonona ny lehiben'ny toekarena vaovao
Fanoloana ireo fiaramanidina mpiady any Canada amin'ny vaovao
Maika avy amin'ny Superstar "Vanilla Ice" sy ...
Tel Aviv mankany Dubai: sidina vaovao avy amin'ny Emirates
Jereo ny vahoaka: Trump dia 'taekwondo...
Hihaona amin'ireo maherifon'ny fizahantany ao amin'ny World Travel Market London...
Voarara ny olona tsy vita vaksiny amin'ny ankamaroan'ny toerana ho an'ny besinimaro amin'ny...
Apple dia manakana ny fivarotana vaovao rehetra any Torkia ho toy ny vola Tiorka ...
Vonjeo ny antsantsantsika
Fampitandremana maika nataon’ny sekretera jeneralin’ny UNWTO...
Tanàna tsara indrindra eran-tany ho an'ny zavakanto an-dalambe – avy any New...
Nanome $ 28 tapitrisa ny NASA amin'ny hetsika fikarohana vaovao
Jet2 dia manafatra fiaramanidina A15neo vaovao 321
Notsapaina sy notsapaina: Camp Boot any Seychelles manaitra
Ny fatiantoka orinasa indostrialy dia mitentina $ 200 miliara ambony amin'ny taona ...